Sida loo Isku Diyaariyo Barnaamijka Tababar Tababarka - Habka Makia
Muhiimadda Isku Diyaarinta Iskudhiga Tababbarka Ciriiriga ah
Maxay maskaxda ku hayaan markaad aragto ama maqasho ereyga "kuleylka"?
Haddii aad la dhibtoonayso inaad maanta ku jirto ama ka fiican tahay, waa inaad ogaataa inaadan kali aheyn. Dhiirrigelinta ayaa badanaa la dareemaa inay tahay mid aad u caajis ah, oo run ahaantii waxtar leh, sidaa darteed dadku wax badan kama qaban. Dareenkii la midka ahaa ee hore, waxaannu samaynay dadaal gaar ah oo aan ku sameynayno habka Isboortiga Makii-tababarka, ama Habka Baxnaaniska ah ee aan ugu yeerno, si aad u soo jiitaan xitaa soo jiidashada xiisaha jimicsiga ee dadku aysan iska indha tirin. Laakiin ka hor intaaan sii dhaafin, aynu diirada saarno su'aasha aasaasiga ah ee ku saabsan kuleylka Maxay tahay sababtu?
Bal qiyaas sidii aad u seexan lahayd ilmo. Si dhakhsa ah, nalalka ayaa sii socdo, qofna wuxuu hoos u dhigaa foomamka canshuur celinta ee hortiis si aad u buuxisid. Kadib, isla mar ahaantaana, waxaa lagaa codsaday inaad sheegto sida cimilada Talaadada ay u egtahay, waxa magacyada awoowayaashaada ay yihiin, oo go'aan ka gaaraya mid ka mid ah lixda caymis oo kala duwan oo aad u diyaarsan tahay inaad aqbasho. Miyaad haysataa wax walba oo gacanta ku haya? Isla arrimahan ayaa ku dhaca jidhkaaga haddii aad ku qasbeyso inaad guurto adigoonan kululayn. Jirkaagu si lama filaan ah ayuu u kacsan yahay, wuxuuna maskaxdaada u dirayaa farriin, laakiin wax kastaa waxay ku dhacaan dhaqdhaqaaq yar. Unug kasta oo jidhkaaga ka mid ah ayaa leh "Maxay?" Qayb ka mid ah jirkaaga ayaa ku dhuftey bareegyada, qayb kale oo khalkhalka ah, inta kalena waa uun xaddidan. Haddii walbahaarka aan lagu soo rogin si lama filaan ah, laakiin wali heer heer sare ah, jidhku ma laha wakhti uu ku kiciyo wareeggaaga, natiijaduna si ku filan waa diiqad ka dhakhso badan.
Kaga Qaadi Kara
Xaqiiqdii, erey ka haboon in ka badan kuleylka ayaa ah mid kacsan. Nooca saxda ah ee jimicsiga jirka ayaa jidhkaaga diyaar u ah inuu tago. Unugyada murqaha ayaa isku diyaarinaya inay qandaraaska, wareegga dhiigga wuxuu wax ku ool yahay in laga saaro asiidhka, unugyada taageerada / unugyada isku xidhan ayaa diyaar u ah inay qaataan diiqada. Iftiinka ayaa iftiiminaya, jirkaagu wuu soo jeedaa, oo diyaar u ah inuu tallaabo buuxa qaado.
Aad bay muhiim ugu tahay jimicsiga nidaamka dareenka, kala-goysyada, iyo unugyada taageerada / isku xirka si loo keeno xaalad diyaargarow. Tani waxay xaqiijineysaa waxtarka iyo amniga ugu fiican. Waxaa la rumeysan yahay in ujeedada ugu muhiimsan ay tahay in la diiriyo muruqyada si looga fogaado muruqyada iyo murqaha. Xaqiiqdii, jidhka ayaa bogsashada muruqyada si ka fiican u ah ka soo goysyada waxyeelada leh iyo unugyada taageerada / isku xirka. Marka nidaamka dareemayaasha "hurudo", murqahaaga ayaa u nugul dhaawacyada, gaar ahaan inta tababarka la socdo dhaqdhaqaaqyo dhaqso ah. Dhab ahaan, kuleylinta murqahaaga ayaa muhiim ah si looga fogaado dhaawacyada iyo hubinta waxtarka tababarkaaga. Waa muhiim inaad dhegaysato jirkaaga si muruqyada aysan "u baqin" iyo "ku dhufo brakes" ka hor inta aan tababarka la bilaabin xitaa. Dhaqdhaqaaqa isdhaafinta sidoo kale waxay ubaahantahay in la sameeyo si khafiif ah marka ugu horeysa oo kaliya markii kuleylka uu dhaco iskuxidu waa la kordhin karaa si loogu daro jagooyinka xad dhaafka ah. Dhidid waa wax fiican, laakiin arousal loo qaaday si aad u daran waa mid aan loo baahnayn jimicsiga caadiga ah.
Ka hor inta aan la bilaabin jimicsiga jimicsiga Makia bilaabmayo, hab-raaca jimicsiga ayaa la sameeyaa, waxana uu jirka kuugu diyaarinayaa diyaargarowga habka jimicsiga Makia ee dhabta ah.
Sidaa darteed Maxay tahay arrin fiican oo ku saabsan Prehab? Dabcan, waxa ugu muhiimsan waa u hoggaansamida himilada. Our Preeb wuxuu ka kooban yahay raaxo leh, xariif ah, iyo dhaqdhaqaaqyo shaqeynaya oo ka soo jeeda dhammaan qaybaha jidhkaaga gaar ahaanba aragtida tababarka jir dhiska. Si kastaba ha ahaatee, waxaynu eegnay xoogaa dheeraad ah. Our Preeb waxaa ka mid ah xayawaanka qotada dheer ee "sagheer" leh oo faa'iido u leh dhabarkaaga iyo jilbaha, curcurada, suxulka, iyo garabka garabka oo xoojiya jirkaaga diyaargarowga loogu talagalay ujeedooyinka jirka ee culus. Baakad isku dhafan oo fudud oo sahlan oo dhaqso ah si ay u qabato adigoo raacaya fiidiyaha Source .